ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေသိမ်းဆည်းမှု ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး၊ လျော်ကြေးပေးပြီးပါ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေသိမ်းဆည်းမှု ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး၊ လျော်ကြေးပေးပြီးပါ??
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅- ရန်ကုန် မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေသိမ်း ဆည်းမှုမှာ ၉၈ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်၍ လျော်ကြေးပေးပြီးပါက စတင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမတွင်ပြုလုပ်သော ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ပထမအဆင့် Master Plan အပြီးသတ်အဆင့်အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက အထက်ပါ အတိုင်း ထည့်သွင်းပြောသည်။
”မြေ ၁ဝဧက အသိမ်းခံရတယ် ဆိုရင် မြေနှစ်ဧကကို မြို့မြေအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးမယ့်အနေနဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး မြေသိမ်းဆည်းမှုရဲ့ ၉၈ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းကို မြေပြင်မှာလက်တွေ့အ ကောင်အထည်ဖော်ရမည့် အခြေ အနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြေတွေကို ကျွန် တော်တို့ လျော်ကြေးပေးလိုက်ပြီး တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းတွေ စလာတော့မှာဖြစ် ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်တည်ဆောက်ရန် တိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ရန်ကုန် မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ NYDC ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ယင်းကုမ္ပဏီသည် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းအစိုးရပိုင်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
NYDC က ဦးဆောင်ပြီး လူထု တွေ့ဆုံပွဲများ အကြိမ်ကြိမ် လုပ် ဆောင်ခဲ့ကာ သက်ဆိုင်သူများနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်လည်း မြေသိမ်းဆည်းမှုများအတွက် လျော်ကြေး ပေးရန် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးမြေ သိမ်းဆည်း ခံရသူများအား သိမ်းဆည်းခံရမှု ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို မြို့မြေအဖြစ်ပြန်လည် ပေးအပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်မည်ဆိုပါကျြေအနမ ဏူညေ တစ်ခုအခိုင်အမာရှိရန် လိုအပ်လာ ပြီဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကဆက်လက် ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ မြေဧက တစ် သောင်းမှာ မြေဧက ၂ဝဝဝ ကိုပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီ၂ဝဝဝမှာ တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဟာ ရန်ကုန်မြို့သစ်ရဲ့ Master Plan အတိုင်းတည်ဆောက်မှသာ လျှင် တကယ်ကောင်းမွန်ပြီး ပြည်စုံတဲ့နေချင်စဖွယ်မြို့ကြီး ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း Master Plan အတွက် မဟာဗျူဟာ မြောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် ရာဆန်းစစ်ခြင်း (Strategic Environmental Assessment-SEA)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Environ-mental Impact Assessment- EIA) များကို NYDC နှင့် အကြံပေး Environmental Resources Management (ERM) အဖွဲ့တို့ ပူး ပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် ယခင်က တင်ဒါအောင် မြင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီများသည် ကျပ်သိန်းငါးသောင်း အပေါင်တင်ခဲ့ရပြီး တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး တစ်နှစ်ကြာမှ တင်ဒါဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသဖြင့် နစ်နာမှုများရှိနိုင်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အစိုးရဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရ မည့် ကြီးမားသောပရောဂျက်ဖြစ် သဖြင့် ယင်းကုမ္ပဏီများကလည်း တင်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်းကို သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်း သိန်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအဆင့် (၁)ကို ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ မြေဧကနှစ် သောင်းခန့်တွင် စတင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့သစ်သို့သွားလာနိုင် သည့် တံတားနှစ်စင်း၊ ကီလိုမီတာ ၂၅အရှည်ပင်မလမ်းများ၊ ၁ဝ စတု ရန်းကီလိုမီတာအကျယ်ရှိ စက်မှုဇုန် နယ်မြေ၊ ၂၂၃မီဂ္ဂါဝပ် လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ဖြန့်ဖြူးရေးအဆောက်အအုံ များ၊ ရေသန့်နှင့် ရေဆိုးထုတ်စက်ရုံ များ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများမှကင်းလွတ်နိုင်သော စွမ်းအင်နည်းပညာများကို မြောက်ကိုရီးယားရှာဖွေနေ
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မျာ?